ne admin pane 19-10-26
Pasi peiyo kumashure kweCovid 19, vanhu vanofanirwa kuzvidzivirira nekupfeka kumeso uye magirovhosi. Nzira inoshanda zvakanyanya inofanira kunge iri yekupfeka masiki. Isu takaongorora sirivha kumeso masiki iyo inogona kuuraya hutachiona hunotapukirwa neiyo nzira yekufema, inogona kuramba 99.9% yehutachiona hweHIN1. Dr. JinJian Fa ...
Gore rega rega, iyo 3ltex kambani inotora chikamu mukuratidzira kweChina nekuratidzira kwepasirese zvine chekuita ne techtextils, kuchengetedzeka uye hutano. A + A International Trade Fair neCongress ndicho chiitiko chakakura kwazvo mumunda weKuchengetedza, Kuchengetedza uye Hutano paWor ...
Gore rega rega, iyo 3ltex kambani inotora chikamu mukuratidzira kweChina nekuratidzira kwepasirese zvine chekuita ne techtextils, kuchengetedzeka uye hutano. Techtextil inotungamira yepasirese kutengeserana kurongeka kwehunyanzvi machira uye nonwovens, ichaunza iyo ...